Les 10 stratégies de manipulations de masse - Ireo tetik'ady 10 entina mandrebireby saina ny vahoaka - Noam Chomsky - blog de la lecture à l'amour, de l'amour à la lecture
I Noam Chomsky dia mpikaroka amerikana momba ny teny, izy no nanome ireo " tetik'ady 10 fandrebirebena vahoaka " amin'ny alalan'ny haino aman-jery.
Indro zaraiko aminareo izy rehetra.
1 - Ny tetik'ady amin'ny fanariana dia : fototra voalohany hifehezana ny fanjakana. Ito paik'ady ito dia mifototra amin'ny fanodinana ny vahoaka tsy hahafantatra ny votoatin'ny olana sy ireo fiovana tapak'ireo mpitarika (politika na toe-karena), izany dia amin'ny fanolorana tsy ankiato zavatra mahavery dia sy vaovao maro tsy misy dikany.
Ny tetik'ady amin'ny fanariana dia ihany koa dia ilaina entina hanakanana ny vahoaka tsy ho liana amin'ny fahalalana fototra eo amin'ny lafiny siansa, toe-karena, ara-pitondra-tena (la psychologie), ara-tsaina (la neurobiologie), ary fifampitondrana (la cybernétique).
" Hazomina ny sain'ny vahoaka ho voarebireby amin'ireo zavatra mitranga tsy misy fotiny ho lavitry ny tena olana. Atao izay hanahirana tokoa ny vahoaka tsy hanany fotoana hieritreretana, hiverenany ao anaty vala misy ireo biby rehetra. " (nadika avy amin'ny Armes silencieuses pour guerres tranquilles)
2 - Mamorona olana dia manolotra vahaolana : na ilay antsoina hoe " olana - fipenimpenina - vahaolana ". Foronina ny olana, izay " safotofoton-javatra iray " hiandrasana ny hevitry ny vahoaka mba hahatonga azy ireo hangataka sy hanaiky ho azy ny vahaolana izay efa voaomana mialoha.
Ohatra : avela hiroborobo ny fangalarana eo an-tanàna na manisy vono-olona mahatsiravina, mba hahatonga ny vahoaka hangataka lalàna ho an'ny filaminana nefa mametra ny fahafahana.
Misy ohatra iray hafa : foronina ny olana ara-toe-karena mba hahafahana mampanaiky ny famerana ny zo maha-olona sy ny fandravana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana.
3 - Ny tetik'ady tsikelikely : mba hanekena didy mahery vaika dia hampidirina miandalana " tsikelikely ", mandritra ny 10 taona izy io. Manaraka io fomba io no nanerena nipetrahan'ny fomba fitantanana fiaraha-monina sy toe-karena vaovao (neolibéralisme) teo anelanelan'ny taona 80 sy 90 : fahaverezan'asa an-jatony, asa an-tselika, asa miovaova, " délocalisations ", tambi-karama tsy mahavelona sns. Izany tanisaina izany dia tokony nitarika fitroarana raha toa ka nihatra tampoka.
4 - Ny tetik'ady manemotra : paika hafa iray entina mampanaiky fanapahan-kevitra mangidy ny filazana azy fa " mafy nefa ilaina ", ka haneken'ny vahoaka izany eto izao fa hampiharina atsy ho atsy. Mora kokoa ny manaiky hihafy rahampitso toy izay izao anio izao satria ny ezaka amin'ny fiafiana mbola hoavy ary koa ny vahoaka bodo manantena foana " ampitso mamiratra " ka tsy hihatra izay mety hofitsitsiana.
Manome fotoana lavalava ny vahoaka hizatra miandalana ny fiovana mangidy sy hanaiky an-kalemena rehefa tonga ny fotoana hampihatra izany.
5 - Mandray ny vahoaka toy ny zaza bodo : ny ankamaroan'ny dokam-barotra natao hoan'ny vahoaka dia mampiasa lahateny na tsangan-kevitra na mpilalao na fomba fiteny anaty sain-jaza. Indraindray aza tena manambany saina hita fa ny mpijery tena zazakely na marary saina : arakaraky ny hamitahana ny mpijery no hitenenana aminy toy ny zaza.
" Raha toa ka hiresaka amin'ny olona iray izay raisina ho zaza 12 taona dia hoazo antoka fa manaraka izany taona izany koa na ny valin-teny na ny fihetsik'ilay olona : tsy ampy fandinihina " (nadika avy amin'ny Armes silencieuses pour guerres tranquilles)
6 - Mikendry ny fo fa tsy ny saina : fomba efa fampiasa foana izy ity mba hamitahana tsy hieritreritra izany hoe handalina sy hamakafaka ny tsirairay. Ankoatr'izay ny fampiasana ny fietanam-po dia manokatra ny varavaran'ny aty fanahy hahafahana mampiditra hevitra, fikasana, fampitahorana, fihevitra, na koa fitondra-tena ... noforonina.
7 - Zarina ny vahoaka tsy hahafantatra sy ho bado : atao izay fomba rehetra mba hitazonana ny vahoaka tsy hahafantatra ny traikefa sy ny paika ampiasaina hanaraha-maso sy handevozana azy reo.
" Atao faran'izay ratsy ny zavatra ampianarina sy atolotra ny vahoaka madinika ka hahatonga ny fifanalavitana hisy hatrany aminy sy ny mpanefoefo ary tsy hahatakaran'izy ireo ny antony. " (nadika avy amin'ny Armes silencieuses pour guerres tranquilles)
8 - Hentanina ny vahoaka hianona anaty tsy fahampiana : haingana ny vahoaka hiteny fa " milay " ny donto saina, ny ambany fisainana sy ny tsy ampy fahaizana ...
9 - Soloina fahamelohana ny mitroatra : ampidirina ao an-tsain'ny tsirairay fa izy irery ihany no tompon'andraikitra amin'izay rehetra manjo azy noho ny tsy fahampian'ny fisainany sy ny fahafahany na koa ny fiezahany.
Ka raha mitady hitroatra hanohitra ny lamina toe-karena ny tsirairary dia lasa manambany sy manameloka ny tenany ihany. Hitarika toe-tsaina malemy izany ka tsy hahavita hihetsika intsony, tsy misy hetsika tsy misy tolona ! ...
10 - Mamantana izay maha-olona ny olona mihoatra ny vahoaka : tao anatin'ny 50 taona izay, ny vokatry ny fivoaran'ny fikarohana dia nampisy hantsana lehibe teo amin'ny fahalalana an'ny vahoaka sy ny ampiharin'ireo mpitondra.
Noho ny haiaina (la biologie), ny fianarana ny ati-doha (la neurobiologie), ny fampiharana ny psikôlôjia (la psychologie appliquée), ny vokatr'ireo no nahafahan'ilay " fitantanana " nanovo fahalalana lehibe ny olombelona (na ara-batana na ara-tsaina).
Nahatonga amin'ny fahafantarana lalina hatrany ny fomban'ny tsirairay izany, nefa ny vahoaka mbola bada.
Midika izany fa manana fahafahana mibaiko sy mandidy ny tsirairay foana ny fitondrana, vahoaka izay tsy manan-tsafidy.
Pourquoi pas ? de David Nicholls - Starter For Ten Voile rouge de Patricia Cornwell - Red Mist
Randrianaivosoa Aina 02/07/2013 21:06
J'aime beaucoup cette publication et surtout sa traduction en malgache, une nécessité pour la population, alphabète qui diffusera à la masse j'espère ! Belle et juste traduction ! MERCI !
MYR 03/07/2013 08:54
Une étape vient d'être franchie ...